‘युद्ध शिविरमा हिँडेको मान्छे’ सार्वजनिक | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home समाचार कृति सार्वजनिक ‘युद्ध शिविरमा हिँडेको मान्छे’ सार्वजनिक
on: कार्तिक २१ , २०७४ मंगलवार- ०६:३३
काठमाडौं ४ असोज ।
युवा कवि प्रथाको दोस्रो कविता संग्रह ‘युद्ध शिविरमा हिँडेको मान्छे’ सार्वजनिक भएको छ। राजधानीमा मंगलबार आयोजित लोकार्पण समारोहमा प्राज्ञ डा. अमर गिरी, कवि विप्लव ढाकाल, कवि निभा शाह र गंगाप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रुपमा संग्रह सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘युद्ध शिविरमा हिँडेको मान्छे’ संग्रह कवि प्रथाको ‘किनारामा उभिएको मान्छे’ पछिको दोस्रो कविता संग्रह हो। चालिसको दशकदेखि नेपाली साहित्यमा सक्रिय प्रथा मूलतः कविता विधामा कलम चलाउँछन्। कवितामा अत्याधिक बिम्बको प्रयोग उनको मौलिक विशेषता हो। काव्य शिविरले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकमा ४९ वटा कविता संकलित छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्राज्ञ डा. अमर गिरीले प्रथाका कवितामा भरपूर बिम्बको प्रयोग पाइने हुँदा सामान्य पाठकलाई अलि गाह्रो पर्ने बताए। उनले प्रथाका कविताले सामाजिक यथार्थलाई राम्रोसँग चित्रण गरेको बताए। कवि निभा शाहले प्रथाका कविताले माक्र्सवादी विचार र सौन्दर्यलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको बताइन्।
कवि विष्णु भण्डारीले प्रथाका कविताले मानवीय जीवनजगतका यथार्थलाई उजेल्याएको बताए। उनले कविले जीवनजगतका विविद आयामलाई प्रस्तुत गरेको भन्दै समाज चित्रणका हिसाबले प्रथाका कविता सशक्त रहेको बताए।
कवि प्रथाले कविता कला र विचारको सम्मिश्रण भएको भन्दै कविताको पनि वर्गीय पक्षधरता हुने बताए। कार्यक्रममा कविले आफ्ना केही कवितासमेत वाचन गरेका थिए।
विप्लवको उपन्यास ‘अविजित’ सार्वजनिक